Imishanguzo yokungezwani komzimba nemithi - GAAPP
Ikhaya>Izinhlobo zokwaliwa komzimba>Imishanguzo Yokungezwani Nemithi
Imishanguzo Yokungezwani NemithiIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2021-03-24T11:17:05+01:00
Uma uba namaqubu, isifuba noma ukuphefumula kanzima ngemuva kokuthatha umuthi, ungahle ube nokungezwani nomuthi noma umuthi.
Imithi evame ukudala ukungezwani komzimba ifaka:
I-penicillin kanye nama-antibiotics ahlobene
Ama-antibiotic aqukethe i-sulfonamides (izidakamizwa ze-sulfa)
I-Aspirin, ibuprofen nezinye izidakamizwa ezingezona ukuvuvukala (ama-NSAID)
Imithi yokwelashwa ngamakhemikhali
Izimpawu zingakhula ngokushesha noma kungakapheli amahora ambalwa, futhi zivame ukuvela ngemuva kokuthatha umuthi owusebenzisile ngaphandle kokuphendula esikhathini esedlule.
Uphawu oluvame kakhulu isifuba - ukuqubuka kwesikhumba esibomvu. Abanye bangabandakanya ukuvuvukala emphinjeni wakho, ukuphefumula kanzima, isicanucanu noma amajaqamba esisu. Lezi yizimpawu ze i-anaphylaxis - ukusabela kokungezwani komzimba okusongela impilo okufanele kulashwe ngokushesha okukhulu.
Ulayini wokuqala wokwelashwa kwe-anaphylaxis yi-epinephrine. Uma unikezwe i-epinephrine auto-injector, yisebenzise ngokushesha, bese uthola ukunakekelwa kwezokwelapha. Uma ungenayo i-auto-injector etholakalayo, shayela ku-911 noma uye egumbini lezimo eziphuthumayo ngokushesha.
Lapho usukhululiwe ku-ER, cela incwadi kadokotela we-epinephrine auto-injectors kanye nokudluliselwa ku-allergist oqinisekiswe yibhodi ukuze kutholakale uhlelo olunembile lokuthola ukwelashwa kanye ne-anaphylaxis.
Ukungezwani nePenicillin? Nakhu Okwenza Kufanele Uhlolwe
Ngemuva kokuthi utholwe ukuthi unezidakamizwa ezibangelwa ukungezwani komzimba nomuthi:
Buza ngemithi ehlobene okufanele uyigweme.
Buza ngezinye izindlela zomuthi ezibangele ukusabela okweqile.
Qiniseka ukuthi umndeni wakho nabo bonke abahlinzeki bakho bezokunakekelwa kwempilo bayakwazi ukungezwani komzimba kwakho kanye nezimpawu ohlangabezana nazo.
Gqoka isongo noma umgexo wesimo esiphuthumayo wezokwelapha okhomba ukungezwani komzimba kwakho.
Ngeminye imininingwane ngokungezwani nezidakamizwa, vakashela i- I-American College of Allergy, Isifuba Somoya Ne-Immunology
Ukungezwani komzimba nePenicillin
Kuxhaswe ngabakwa-GAAPP Member Organisation Ukungezwani komzimba ne-Asthma Network